Top 3 Hababka Popular in dib Photos Google iyo Videos
Qof walba jecel yahay meel ay ku hayn karaa sawiro iyo videos ay meel fiican iyo qaar ka mid ah codsiyada weyn bixisaa oo kaliya in. Waxaad laga yaabaa in aad videos iyo sawiro aad u badan in aad rabto in aad meel ammaan ah iyaga loogu jecel? Waxa ugu weyn oo lagu kaydiyo sawirada iyo videos aad ee meelo badan waa in aad naftaada ku badbaadin dhibaato ah ee iyaga laga badiyay. Tani gaar ahaan waa kiiska videos iyo sawiro wakiil daqiiqad gaar ah ee noloshaada. Ha noqoto sawiro iyo videos Aroosyada, xisbiyada, qalin jabinta, waxaan qaadi peek ah ee qaar ka mid ah xal lacag la'aan ah oo aad isticmaali karto si dib aad videos iyo sawiro.
Isticmaalka Google Photo Library
Google photos waa lacag la'aan ah si ay u isticmaalaan nidaam maamula sawiro la Ujeedada ah ee isticmaala la siiyo meel aan xad lahayn kaydinta. Waxaa la iman badan oo ka mid ah qaababka ay ugudbeen aad abid ka fekeri karaa ee ay ka mid yihiin awoodaha tafatirka sawir, heshiis smart ee photos, awood la yaab leh raadinta, awooda lagu kuwo kale looga hortago nuqul. Maktabadda sawir Google bixisaa hab qabow ku ool ah si ay u kaydiso videos iyo sawiro. Waxaad heli doontaa si loo soo dajiyo photos Google app in aad telefoon ama qalabka kale ee mobile kasta.
Marka aad u rakibay, abuurtaan codsiga iyo tuubada on icon menu.
Riix Settings ku xiga gurmad iyo nidaameed.
Leexo habka gurmad ah oo ku saabsan. Si aad u dooratid waxa aad rabto in aad dib u kor maktabadda sawir Google, guji icon menu iyo dooro Photos ka dibna dooro Videos.
Isticmaalka Google Plus
Google Plus waa in ka badan kaliya qalab shabakadaha bulshada iyo waqtigii aad isku dayay adeegsiga qaar ka mid ah qaababka ay waxoogaa ka badan. Mid ka mid ah feature la yaab leh waa kaydinta aan xad lahayn u bixinayo sawiro iyo videos caadiga ah. Feature weyn leh Google daray app waa auto ka dib feature u siineya isticmaala. Tani waa run ahaantii weyn kuwa Cunid qaadashada sawiro si joogta ah u siin in mid ka mid ma leedahay in la sameeyo Uploads buuggan. Waxa ugu horeeya ee ay tahay in aad samayso waa rakibi Google oo lagu daray app qalabka android aad.
Burcad app iyo tagaan goobaha iyo toggle on kaabta Auto ah. Waa inaad sidoo kale ay doortaan baaxadda sawiro aad jeceshahay in aad isticmaasho.
Markaas Waxaad dooran doonaa fayl in ay tahay in la synced. Si tan loo sameeyo, simbiriirixan gacanta bidix iyo menu heli qalabka. Waxaad ka heli doonaa si uu u ogaado fayl in lagu synced in lagu daray Google. Kuwa daruur midig synced-haddii aadan rabin in lagu synced tuubada oo ku hubiyaan in ay noqon cawlan.
Si aad u dhowraan bandwidth, waxa kale oo aad dooran kartaa nooca network aad jeceshahay u auto hayaan. Tag dib photos / videos iyo kala doorto oo keliya Wi-Fi oo Wi-Fi ah ama mobile network.
Waxaad ka eegi kartaa kuwan sawiro aad version internetka ee lagu daray Google ay si fudud u raadinaya #AutoBackup in Photos Area of ​​Google Plus.
Isticmaalka Wondershare MobileGo
Tani waa qalab software in bixisaa soo diyaariyeen balaadhan oo ah xal u android iyo macruufka isticmaala in xirmo hal ah. Software waa ku weyn yahay maaraynta waxyaabaha aad telefoonka ee ay ka mid yihiin wax ka qabashada sawir iyo video hayaan ma aha oo kaliya. Waxa kale oo aad u wanaagsan oo bixiya adeegyada kabashada xogta, oofiyo soo afjarno in android halka sidoo kale bixinta fursad ay ku soo dhoofsadaan iyo alaabtayda oo dhoofinta aad. Si aad u isticmaasho codsigan in ay dib u kor sawiro iyo videos aad, waxaad u baahan doontaa inaad kala soo baxdo MobileGo Wondershare si aad u computer hore. In sidaa la yeelo, waa inaad tagtaa bogga rasmiga ah ee wax soo saarka wondershare.com iyo soo qaado version aad dooneyso in aad kala soo bixi ku xiran tahay madal PC aad socda ee ku saabsan. Ka dib markii la rakibey, waxaad u baahan doontaa si aad u hesho baasaboorka wondershare si ay u helaan buuxa muuqaalada-laakiin waxaad isticmaali kartaa qaababka xor ah oo aan saxiixay in. Haddii aad rabto in aad soo wareegto kaliya guji ee geeska kore ee midigta.
Haddii aad rabto in aad dib ilaa sawiro iyo videos aad lacag la'aan ah:
Connect telefoonka gacanta via USB iyo awood kaydinta tiro adigoo ku Device Media (MTP). Waxaad sidoo kale u baahan doontaa inaad awood u debugging USB ah ee software-ka si loo ogaado telefoonka aad android. Si tan loo sameeyo, u tag Settings oo heli Developer Options.
Tubada waxa ku saabsan iyo hubiyaan debugging USB. Talaabooyinkaasi waxay awood debugging USB kala duwan yihiin taas oo ku xidhan taleefanka aad isticmaalayso.
Waxaad u baahan doontaa si loo soo dajiyo MobileGo Wondershare app ku saabsan qalabka telefoonada gacanta iyo isku xirka labada qalabka inay xiriir Wi-Fi in ay oggolaadaan in xidhiidhka u dhaxeeya. Burcad aad app oo guji
Riix OK in lambarka sirta QR lagu soo bandhigay codsiga iyo labada qalabka xiriiriso doonaa.
Waxaad hadda dib kartaa videos ama sawiro si aad u computer ama in qalabka android. Si aad dib ilaa sawiro aad u your computer;
Dhaqaaq qaybta bidix ee interface iyo sawiro ka heli hore ka dibna dooro Library ama Camera.
Ka dooro sawirrada aad dooneyso ilaa iyo dib guji dhoofinta in xulashada goobta aad rabto in aad ku kaydiso files ee kombiyuutarka. Nidaamka isku loo isticmaali karaa in gurmad videos ka qalab mobile.
Ma Kuwan saddex hab oo cajiib ah in aad walwalo mar abid laga badiyay sawiradaada. Qurux waa in ay yihiin lacag la'aan ah oo aad wax kharaj ah kuguma in ay isku dayaan oo loo arko mid adiga kugu habboon.
> Resource > Android Data Manager > Top 3 Hababka Popular in dib Photos Google iyo Videos